Ny zavatra tiako ho hita ao amin'ny iOS 9 mandritra ny WWDC 2015 | Vaovao IPhone
Efa misy daty ho an'ny WWDC 2015: 8-12 Jona. Miaraka amin'ny fandrosoana tsy mahazatra, Apple dia nanamafy ny daty hisian'ny kaonferansa ho an'ny mpamorona, amin'izay fotoana izay ny orinasa Cupertino dia mampiseho amintsika izay ho rafitra fiasa vaovao ho an'ny vanim-potoana manaraka. Toy ny mahazatra, iOS 9 sy OS X 10.11 (OS X 11?) Antenaina hiseho voalohany. tamin'ny famelabelarana voalohany, ary na dia betsaka aza ny voalaza fa ireo kinova vaovao ireo dia mety ho "kinova fanamafisana" fotsiny hahatratrarana rafitra marin-toerana sy azo itokisana ary ny mpamorona sy ny Apple mihitsy no manosotra ny fampiharana azy ireo ka ny fandidiana no mety indrindra hieritreretana fa tsy hisy zava-baovao tsy misy fotony. Inona no mety hoentin'ny iOS 9? Tsy antenaiko hisy revolisiona na fisehoan-javatra vaovao mamaky tany, fa tiako ny hahazo ny sasany amin'ireo fangatahana izay efa nataon'ny mpampiasa hatramin'ny ela.
1 Kaonty mpampiasa
3 Siri ho an'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo
4 Valiny haingana amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo
5 Safidio ny rindranasa default
Afaka mampiasa kaonty samihafa an'ny mpampiasa amin'ny iPad faniriana saika antitra toy ny iPad tenany aza ny Apple tokony hiditra indray andro any. ny takelaka Apple dia mila manana ny asany manokana mampiavaka azy amin'ny iPhone, ary ny iray amin'ireo voalohany dia tokony ity. Ny takelaka dia, amin'ny ankamaroan'ny tranga, fitaovana ho an'ny fianakaviana, tsy toy ny iPhone izay matetika fitaovana tena manokana. Fahazoan-dàlana samy hafa, fampiharana samihafa, fikirana samihafa ary kaonty mailaka, iMessage sy FaceTime, sns.
Apple dia manome tsindraindray ny iCloud Drive mitovy amin'ny an'ny serivisy fitehirizana rahona hafa toa ny Dropbox, Box na Google Drive, na dia mbola lavitra aza ny lalana tokony haleha. Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra izay mbola ao amin'ny lisitry ny "miandry" dia ny afaka manana ny mpikaroka rakitra azy manokana, tsy mila mametraka fampiharana an'ny antoko fahatelo. Mampiasa Documents aho, fampiharana maimaimpoana tsara ho an'ny iPhone sy iPad, fa ny fampiharana teratany kosa dia hanome fiarovana sy fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampifangaroana tanteraka ny rafitra.
Siri ho an'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo
Apple dia te hampifandray an'i Siri indray, fa ny andraikitry ny mpanampy virtoaly an'i Apple ho tena zava-dehibe dia mila manome alalana ireo mpandrindra fampiharana hampiasa azy io. Afaka manomboka milalao mozika amin'ny Spotify, manokatra fampiharana podcast toy ny Overcast na mandefasa hafatra amin'ny alàlan'ny WhatsApp dia ohatra vitsivitsy fotsiny amin'ny zavatra azon'i Siri atao raha nanaiky izany i Apple. Efa nataonao tamin'ny iCloud Drive na tamin'ny Touch ID, fiasa natokana tamin'ny voalohany ho an'ny Apple application.
Valiny haingana amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo
Ny fahafahana mamaly hafatra avy amin'ny fampandrenesana nefa tsy mila manokatra ny rindranasa dia efa azo atao ao amin'ny iMessage hatramin'ny namoahana ny iOS 8. tao amin'ny OS X ity valiny haingana ity dia azo atao ihany koa amin'ireo fampiharana izay nohavaozina toy ny Telegram. iOS dia tokony hamela ny fampiharana fandefasan-kafatra na mailaka (Telegram, WhatsApp, Outlook, Mailbox ...) hampiasa ny valiny haingana toy ny efa ataon'ny serivisy fandefasan-kafatra Apple.
Safidio ny rindranasa default
Ny fanitarana iOS 8 dia dingana lehibe iray hampidirana ireo fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo ao amin'ilay rafitra. Afaka mandefa rakitra avy amin'ny rindranasa iray mankany amin'ny iray hafa ianao amin'ny farany, na mizara azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana tsy Apple. Fa dingana iray hafa indray no tokony hatao: Apple dia mamela azontsika atao ny misafidy izay rindranasa ampiasainay default amin'ny asa sasany, satria efa nitranga tao amin'ny OS X. Safari, Mail, iBooks, Messages, sns dia efa napetraka mialoha, saingy tsy tokony hanery antsika hampiasa azy ireo izy ireo. Ny fahafahanao mametraka an'i Outlook ho toy ny mpanjifan'ny mailaka default (ohatra) dia zavatra tena hahafinaritra ho an'ny maro amintsika izay manalavitra ny mpanjifa iOS tera-tany (lany andro).
3 taona lasa izay, mety tsy ho noeritreretina tao amin'ny Apple akory ny iray amin'ireo hevitra ireo, saingy niova be ny orinasa ary ny rafitra fiasan-telefaona findainy, iOS, dia tsy ilay rafitra hermetika intsony izay tsy nisy idirana ary tsy nihetsika ny zava-drehetra. Androany dia mino aho fa tsy misy mino na iray aza amin'ireo tolo-kevitra ireo. Iza ny anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ny zavatra tiako ho hita ao amin'ny iOS 9 mandritra ny WWDC 2015
Te-hisafidy ireo rindranasa misy default aho (ohatra chrome na google maps satria azo atao amin'ny jailbreak), tiako ny Apple hampihatra zavatra mitovy amin'ny tokony hatao trano virtoaly, toa tena ilaina izany ary farafahakeliny ny vidin'ny bateria ( farafaharatsiny raha tsy avelanao ho mavitrika izany rehefa tsy miasa izy), nohatsaraina ny foibe fanaraha-maso (indrindra ny hitsin-dàlana) ary nohatsaraina ny fitoniana sy ny fahombiazana (fantatro fa ny ios 8.3 tamin'izay henoko dia nihatsara ampy, izy io ho tsara raha manaraka ny andalana iray ihany izy ireo).
Ankehitriny, afa-tsy ny fampisehoana sy ny fitoniana (angamba) tsy dia mahita an'izany aho ao amin'ny iOS 9.
Ampandehano ny emoji miafina ao amin'ny iOS 8.3 avy amin'ny Spock avy amin'ny Star Trek
Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia manana vidin'ny famokarana avo kokoa noho ny iPhone 6